Xog:Qaar kamid ah Wasaaradaha Somalia oo qarka u saaran in ay is xiraan & Korontadii oo laga goostay + Sabab – Puntlandtimes
Xog:Qaar kamid ah Wasaaradaha Somalia oo qarka u saaran in ay is xiraan & Korontadii oo laga goostay + Sabab
MUQDISHO(P-TIMES)- In ka badan 5 wasaarad oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmo koronto la’aan ah, waxaa laga goostay korontadii kadib markii ay muddo 4 bil ah iska bixin waayeen lacagtii.
Wasaaradaha koronto la’aanta ah waxaa ka mid ah: Wasaaradda Beeraha, Wasaaradda Ganacsiga, Wasaaradda Xannaanada Xoolaha, Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta iyo wasaarado kale oo muhiim ah.
Sida ay Goobjoog News u xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradahaasi, waxaa jirtay inta aan korontada la goosan ay shirkadda korontada digniin siisay xarumahaas wasaaradaha si ay u bixiyaan laakin ay guul-dareysteen kadibna laga goostay.
Mas’uuliyiinta wasaaradahaasi waxaa ay leeyihiin, waxaa is-qaban la’a in ay wasaaradda maaliyadda JFS dhahdo waxaa kordhay dakhliga gudaha iyo canshuur bixinta isla markaana ay iska bixin weyso qarashkii korontada iyo biyaha xarumaha ay deggan yihiin.
Dhinaca kale, Goobjoog News waxaa ay iskudeyday inay la xiriiro wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle iyo shirkadaha korontada, laakin ma gaarin, qaarna kama helin jawaab.